ट्याग: नाफा Martech Zone
वफादार ग्राहकको आरओआई के हो?
शुक्रबार, डिसेम्बर 15, 2017 शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० Douglas Karr
हामीले उद्यम ग्राहक सफलता विज्ञहरू, बोलस्ट्राको साथ एक नयाँ सगाई शुरू गर्यौं। बोलस्ट्रा एक सफ्टवेयर समाधान (सास) प्रदायक हो व्यवसायका लागि व्यवसाय कम्पनीहरूले मर्न घटाउने र माथिल्लो अवसरहरूको पहिचान गरेर तिनीहरूको पुनरावर्ती राजस्व बढाउन खोजिरहेका छन्। तिनीहरूको समाधान, निर्मित उत्तम अभ्यासहरूको साथ, तपाईंको कम्पनीले तपाईंको ग्राहकहरूले माग गरेको इच्छित परिणामहरू ड्राइभ गर्न मद्दत गर्दछ। पछिल्ला केही वर्षहरूमा, हाम्रो चपल मार्केटिंग यात्राको रूपमा विकसित भएको छ र हामी एक व्यवसायको 'मार्केटिंग' को परिपक्वता मूल्यांकन गर्दछौं
न्यूरो डिजाईन के हो?
शनिबार, मार्च 4, 2017 शनिबार, मार्च 4, 2017 डारेन ब्रिजर
न्यूरो डिजाईन एक नयाँ र बढ्दो क्षेत्र हो जुन दिमाग विज्ञानबाट अन्तर्दृष्टि लागू गर्दछ थप शिल्प डिजाइनलाई मद्दत गर्न। यी अन्तरदृष्टि दुई मुख्य स्रोतबाट आउन सक्छन्: न्यूरो डिजाइनको सामान्य अभ्यासहरू उत्तम अभ्यासहरू जुन मानव दृश्य प्रणाली र दर्शनको मनोविज्ञानमा शैक्षिक अनुसन्धानबाट लिइएको हो। यसले चीजहरू समावेश गर्दछ जस्तै हाम्रो दृश्य क्षेत्रको कुन क्षेत्रहरू दृश्य तत्त्वहरू हेरेमा बढी संवेदनशील हुन्छन्, त्यसैले डिजाइनरहरूलाई कम्पोज गर्न मद्दत गर्दछ